လူမှုဖူလုံရေး ( SSB )ဆိုတာဘာလဲ? - JobExpress Myanmar
လူမှုဖူလုံရေးဆိုသည်မှာ လုပ်ခဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုသာ အားထားနေရသည့် အလုပ်သမားများရဲ့ ဝင်ငွေလျော့နည်းခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်းနှင့် လူမှုဒုက္ခအဝဝ ကြုံတွေ့ရသည့် အခါတွင် အာမခံစနစ်အပေါ် အခြေခံပြီး အခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးခြင်းနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည် လူမှုဖူလုံရေးစနစ်၏ အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နာမကျန်းမှု၊ မီးဖွားမှု၊ အလုပ်ခွင်ထိခိုက်မှုဒဏ်ရာရမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု၊ သေဆုံးမှု အစရှိသည့် အချက်များသည် လူမှူဖူလုံရေးတွင် အကျူံးဝင်ပါတယ်။
SSB လုပ်ဆောင်ခြင်းက အလုပ်သမားများအတွက် ဘာတွေအကျိုးခံစားခွင့်ရှိနိုင်လဲ?
အလုပ်သမားများအနေနဲ့ မိမိသဘောအလျောက် အာမခံငွေထားရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြင် တစ်ခြားသော လူမှုဖူလုံခွင့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိခြင်း။
အလုပ်ရှင်နှဲ့ အလုပ်သမားတို့က ပေးသွင်းထားသည့် ငွေကြေးတစ်ချို့ကို စုဆောင်းငွေကဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ပြန်လည်ထုတ်ယူခံစားခွင့်ရှိစေရရှိခြင်း။
အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် ဆေးဝါးကုသမှုဆက်လက်ခံယူခွင့်၊ မိသားစုထောက်ပံ့မှု အကျိုးခံစားခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှုအကျိုးခံစားခွင့်၊ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်၊ ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်၊ အလုပ်လက်မဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်၊ အိမ်ရာနေထိုင်ခွင့် နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကိုပါ ရရှိစေခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။
အာမခံအလုပ်သမားများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့
နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆေးကုသမှုပေးခြင်း။
လုပ်ငန်းခွင်တွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့ပါက ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်များထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် လူမှုဖူလှုံရေးအာမခံထားရှိခြင်းရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ၊ အာမခံထားရှိရန်လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကိုအနည်းငယ်သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်ပြီဟုကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ SSB ခေါ် လူမှုဖူလှုံရေးအာမခံကတ်ပြားလှျောက်ရာတွင် ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့်အချက်များနှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ လူမှုဖူလှုံရေးရုံးကထုတ်ပေးထားသည့် သတ်သေခံကတ်ပြားများအကြောင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Source By https://www.mol.gov.mm/mm/
2020 နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် Booming ဖြစ်လာနိုင်သော လုပ်ငန်း (၁၀)မျိုး - အပိုင်း (၁)
လူမှုဖူလုံရေး အကြောင်း အပိုင်း ( ၂ )